သူဌေးမကြီးမာမာနွယ် – Grab Love Story
မာမာနွယ်ကုတင်ပေါ်တွင် ခေါင်းအုံးကို ကျောမှီထိုင်ကာပေါင်နှစ်ချောင်းကိုခပ်ကားကားလုပ်ထားစဉ် သူမထမီအောက်မှ ခေါင်းတစ်ခုကို အသာပွတ်ပေးနေပြီး ဆေးလိပ်တစ်လိပ်ကို အရသာခံသောက် နေ၏။ဆေးလိပ်ငွေ့ကို အဆုတ်ထဲသို့ရှိုက်သွင်းလိုက်ပြီး တစ်ချက်အဖုတ်ထဲမှ ကျင်ခနဲဖြစ်သွားသဖြင့်မျက်နှာတစ်ချက်ရှုံ့လိုက်သည်။တုတ်ခိုင်သော ပေါင်နှစ်ချောင်းကို အတင်းညှပ်ထားလိုက်ပြီး ခေါင်းကိုအတင်းပွတ်သပ်နေလိုက်သည်။နောက်မှ ဘေးရှိစားပွဲပေါ်မှ ဆေးလိပ်ပြာခွက်ထဲ ဆေးလိပ်ကို ထိုးထည့်လိုက်ပြီး ထမီအောက်စကို ဆွဲလှန်လိုက်သောအခါ သူမပေါင်ကြားမှ နုနယ်လွန်းသော မျက်နှာပေါက်နှင့် အသားအရေဖြူဖွေးနေသော ခပ်ချောချောကောင်လေးတစ်ယောက်မှာ မျက်နှာတစ်ခုလုံးရွှဲနစ်လျက် ခေါင်းမော့လာလေ၏။
“ကောင်လေး..နင့်ကိုဘယ်သူကရပ်ခိုင်းလို့ရပ်လိုက်တာလည်း..” သူမအမေးကြောင့် ထိုချာတိတ်မှာ ထိတ်လန့်စွာဖြင့် “ဟို…မနွယ်ပီးသွားလို့..တော်ပီထင်လို့ပါ..ကျွန်တော်ထပ်လျက်ပေးပါ့မယ်..”ကောင်လေးက အလန့်တကြား မျက်လုံးဝိုင်းကြီးများနှင့် ဆိုလိုက်ရင်း မာမာနွယ်ပေါင်ကြားကို မျက်နှာအပ်လိုက်ပြီး လျှာထုတ်ခါ အလျှားလိုက်တစ်ချက်ပင့် လျက်လိုက်သည်။ “တော်စမ်း..ငါ့စောက်ပတ်ကျင်တယ်..ထ….ငါ့အကျီချွတ်ပေးစမ်း”မာမာနွယ်ကောင်လေးကိုငေါက်လိုက်ရင်း သူမရင်စေ့အကျီကို ချွတ်ခိုင်းလိုက်သည်နှင့် ၄င်း ကောင်လေးကလည်း သူမအကျီကြယ်သီးများကို အမိန့်အတိုင်း လက်လှမ်းခါဖြုတ်ပေးလိုက်သည်။
သူမရင်ဟာလာဟင်းလင်း ဖြစ်သွားသည်နှင့် ဟင်းချိုပန်းကန်လုံးကို မှောက်ထားသည်နှင့် တူသောစနေ နှစ်ခိုင်နှင့် မို့မောက်တင်းမာနေလျက် နီရဲသောပတ္တမြားစေ့ကလေးတင်ထားသည့်အလား နို့သီးခေါင်းမှာ အကြောစိမ်းမျှင်မျှင်လေးများ ၀န်းရံခစားနေသည်ကို တွေ့မြင်လိုက်ရသည်။ကောင်လေးကတော့ မာမာနွယ်အမိန့်ပေးထားလို့ ကုတင်ပေါ်ရောက်ကတည်းက မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်း တက်လာချင်းဖြစ်သည်။ “ဟဲ့…နင့်ကို..ကြည့်ဖို့ခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူး..ငါ့နို့ကို ကိုင်လေ..ဘာအူကြောင်ကြောင်လုပ်နေတာလည်း…”ကောင်လေးမှာ မာမာနွယ်ကို ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေစဉ် သူမခိုင်းလိုက်သဖြင့် မာမာနွယ့် နို့နှစ်လုံးကို အသာအယာကိုင်လိုက်သည်နှင့် မာမာနွယ်ကလည်း လက်တစ်ဖက်ကိုကောင်လေး ပေါင်ကြားထဲထည့်ကာကောင်လေး၏ ဖွားဖက်တော်ကို လက်နှင့်ဆုတ်လိုက်သည်။
ကောင်လေ၏ လီးမှာ ထိုအချိန်ထိမထောင်လာသေးသည်ကို အခုမှ မာမာနွယ်သိလိုက်ရတော့ “ဟင်..နင်..ဘာဖြစ်လို့..နင့်လီးကဘာဖြစ်နေတာလဲ..ဟဲ့..ပြောလေ..” “ဟို..ဘာမှမဖြစ်….ကျွန်တော်…ဟို….မနွယ်ကို…..ကြောက်….ခဏလေးပါ..မနွယ်..အခု ..ချက်ချင်း..မတ်……..မှာ” “နင်နဲ့ကတော့….အခုချက်ချင်း..နင်ဂွင်းထုစမ်း…..ငါလိုးတာခံချင်နေမှ..တွေ့မယ်..နောက်မှ..အခု..နင့်လီးကိုထုလေ…မြန်မြန်လုပ်..” “ဟုတ်ကဲ့..မနွယ်..အင့်..အင့်..”ချာတိတ်မှာ မာမာနွယ်စိတ်ဆိုးမှာ ကြောက်သဖြင့် သူ့၈လက်မလောက်ရှည်သောလီးကို အရေပြားနာအောင်အတင်းဆွဲဆွဲချရင်း ဂွင်းထုလိုက်သည်နှင့် လီးမှာ အကြောပြိုင်းပြိုင်းထခါမတ်ထောင်ထ လာလေသည်။မာမာနွယ်က ကောင်လေး၏လီးမတ်လာသည်ကိုမြင်သည်နှင့် အောက်တွင်ကျန်သေးသောထမီကို ချွတ်လိုက်ရင်းကောင်လေးဆီလှမ်းပစ်လိုက်သည်။ကောင်လေးကလည်း မာမာနွယ်လှမ်းပစ်လိုက်သောထမီကို ယောင်ပြီးဖမ်းလိုက်သည်။
“နင်..အဲဒီထမီကို ၀တ်ထားစမ်း..မိန်းမလိုဝတ်…လီးလည်းကျမသွားစေနဲ့..၀တ်လေ..”ကောင်လေးမှာ ထမီကိုမိန်းမလို ၀တ်ဆင်လိုက်ရသည်။လီးကထောင်မတ်နေသဖြင့် ထမီအောက်တွင်တောင်မတ်နေလျက်ရှိလေ၏။ “ကဲ..နင်..ပက်လပ်အိပ်.. နောက်ထမီကိုလှန်လိုက်..ဟုတ်ပီ..”မာမာနွယ်ပြောပြောဆိုဆို ကောင်လေး၏ကိုယ်ပေါ်သို့ တက်ခွလိုက်ပြီး သူမစောက်ပတ်ကို လီးနှင့်တေ့ခါဖြည်းဖြည်းခြင်းထိုင်ချလိုက်သည်။
“ကောင်မ..နင့်လီးက..တုတ်လိုက်တာ..အင်း..အင်း..အင့်..အင့်..ကောင်မ..ငါ.နင့်ကိုတက်လိုးတာကောင်းတယ်မလား…ကောင်မဖြေလေ..ဖြန်း..အင့်.အင့်..အင့်..” “ကောင်းပါတယ်..မနွယ်ရယ်လိုးပါ..ကျွန်တော့်ကိုလိုးပေးပါ…ကောင်းလွန်းလို့..အ..မနွယ်ဖြည်းဖြည်း..အ..ဖြည်း..အ..ဗေါက်..ဗေါက်..ဗေါက်..ဗေါက်…”မာမာနွယ်မှာ အပေါ်မှနေခါ ဖင်လုံးကြီးကိုမမတင် ..ပီးအရှိန်နှင့် ကောင်လေးပေါ်ဆောင့်ဆောင့်ချသည်။ကောင်လေးပါးကိုလည်း အပေါ်မှ ဘယ်ပြန်ညာပြန်လည်းရိုက်လိုက်သေးသည်။ တင်ပါးနှစ်ခု ကြားမှာ ၄င်းကောင်လေး၏ လီးတန်က ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဖြင့်နှစ်ယောက်လုံးအရှိန်တက်နေကြသည်။ကြာလာတော့မာမာနွယ်က မိန်းမသားဆိုတော့မောလာသည်။
“ဟင်..ဟင်..ကောင်..လေး..ထ..ငါ့ကိုလာလိုးစမ်း..ငါကုန်းပေးမယ်” မာမာနွယ်ပြောပြီးသည်နှင့် ကောင်လေးကိုယ်ပေါ်မှ ဆင်းခါ ဘေးတွင် ဖင်ဘူးတောင်းထောင်ပေးထားလိုက်သည်။်၎င်းကောင်လေးမှာလည်း အမြန်ထ မာမာနွယ့်ခါးကိုစုံကိုင်ပြီး သူမစောက်ပတ်ထဲ ဆောင့်သွင်း..ဆောင့်ထုတ်ဖြင့် ကြမ်းကြမ်းလေးလိုးတော့၏။မာမာနွယ် ဖင်လုံးမှာ ဆောင့်လိုးနေသည့်ဒဏ်ကြောင့် လှိုင်းထလျက်ရှိလေ၏။ တဖြည်းဖြည်းကောင်လေးမှာ မြန်လာပြီး မတ်တတ်ရပ်ဒူးကွေးကာ တဆက်ဆက်ဖြင့် စက်သေနတ်ပစ်သလို လိုးလိုက်မှ မာမာနွယ်မျက်နှာမော့လာပြီး ဆံပင်များခါရမ်းလျက် အတင်းပင် ပြန်လည် ဖင်ကိုနောက်ပစ်ပြီး ဆောင့်ချက်နှင့်အညီ တောင့်ထားနေရသည်။
“ဘတ်..ဘတ်.ဘတ်.ဘတ်..ဗေါက်.ဗေါက်.ဗေါက်ဗေါက်ဗေါက်ဗေါက်ဗေါက်.အင့်.အင့်.အ..အ..အ.အအ.အ.အအအအအအအအအ..အင့်.အား..ရှီး..ဟ..”တစ်မိနစ်လောက် စက်သေနတ်မွှေ့လိုက်သည်နှင့် မာမာနွယ့် စောက်ပတ်ကုန်းမှ အရည်များ ကျဆင်းလာပြီး လက်မြှောက်အရှုံးပေး ဖင်ကုန်းပေးသည်နှင့်တန်အောင် အရသာရှိစွာဖြင့် မှောက်ကျသွားလေ တော့၏။မာမာနွယ်ပီးသွားသည်ကို သိလိုက်သည်နှင့် ကောင်လေးမှာ ဆက်မလိုးရဲ အသာအယာ သူ့လီးကိုစောက်ပတ်ကြားမှ နောက်ဆုတ်ခါထုတ်လိုက်ရသည်။
“ဟူး..ကောင်လေး..နင်တယ်တော်ပါလား..ငါစောက်ရည်တော်တော်ခန်းသွားပြီ..နင်မပီးသေးဘူးမလား..လာ..ငါမျက်နှာပေါ်တက်ခွပြီး..ဂွင်းထုစမ်း..”ကောင်လေး လီးကိုကိုင် မာမာနွယ်လည်ပင်းနားတက် ဒူးထောက်လိုက်ပြီး လီးကိုလက်နှင့် ဂွင်းထုနေလေသည်။ “အင်း..ထု..ထု..လရည်တွေ.ငါ့မျက်နှာအနှံ့စင်အောင်လုပ်စမ်း..ထု.မြန်.မြန်မြန်..ထု..အ..ဟုတ်ပြီ..အင်း.ကောင်းလိုက်တာ..နွေးနေတာပဲ..အင်း..အင်း”လရည်ထွက်သည်နှင့် မာမာနွယ်က လီးကိုလက်နှင့်ကိုင်ပီး မျက်နှာအနှံ့ဖြန်းချတော့၏။ လီးဒစ်ဖျားကိုလည်း ပါးစပ်နှင့် နို့စို့သလို တပြွတ်ပြွတ်စို့လိုက်သေး၏။ကောင်လေး လီးရည်ကုန်သွားမှလွှတ်လိုက်ပြီး မျက်နှာအနှံ့ အဖြူပြစ်ပြစ် လရည်များကို တယုတယနှင့် လိမ်းကျံနေလေတော့သည်။
“နင့်..လရည်ကပျစ်လိုက်တာ..အင်း.အရသာလဲရှိတယ်..လာအုံး..ဟစမ်း..”မာမာနွယ်က သူ့လက်ညှိုးနှင့်မျက်နှာပေါ်က လရည်အချို့ကို သပ်ယူလိုက်ပြီး ကောင်လေးပါးစပ်ထဲ လက်ညှိုးထည့်ခါ လရည်ကိုလျက်ခိုင်းလေရာ “ဘယ်လိုလဲ..ငါပြောတာ..နင့်လရည်က .အရသာရှိတယ်မလား..” “အင်း..ဟုတ်..ဟုတ်ကဲ့.မ.နွယ်…အ.ရသာ.ရှိပါတယ်..”ကောင်လေးမှာ ကိုယ့်လရည်ကို ကိုယ်တိုင်မျိုချနေရပြီး မာမာနွယ်အကြိုက်အလိုက်သင့်ဖြေကြားမှ ပိုဆိုးတော့သည်။ “အင်း..ဒါဆို..နောက်နင်..ဂွင်းထုပြီး.ကိုယ့်လရည်ကို..စားပေါ့..အခုတော့..ငါသေးပေါက်ချင်လာပြီ..အိမ်သာထဲလိုက်ခဲ့..”မာမာနွယ်ကုတင်ပေါ်မှ ထပြီး ၄င်းကောင်လေးလက်ကိုဆွဲကာ အခန်းထဲရှိသူမအိမ်သာသို့ ခေါ်ဆောင်သွားသည်။
နောက်အိမ်သာဘိုထိုင်တွင် ထိုင်ပြီး “လာ..ကောင်လေး..နင်ကြိုက်တဲ့..ငါ့မျက်နှာပေါ်က..နင့်လရည်တွေကို လျှာနဲ့လာလျက်စမ်း..ပြောင်နေအောင်လျက်နော်..” ကောင်လေးခင်ဗျာ..ဘာမှာပြန်မလှန်ဝံ့ပဲ..သူ့လရည်များ ဖြင့်ပြောင်လက်ပြစ်ချွဲနေသော မာမာနွယ့်မျက်နှာအနှံ့ကို လျှာလေးထုတ်ပြီး ရက်ရက်ပေးနေစဉ် မာမာနွယ်က အိမ်သာထဲသို့သေးများ တဗြန်းဗြန်းပေါက်ချနေလျက်ရှိသည်။မာမာနွယ်သေးပေါက်ပီးတော့ မျက်နှာပေါ်မှာ လရည်များတစက်မကျန် အောင်ရက်ပြီးသွားပြီဖြစ်၏။
“ကောင်းတယ်..နင့်က…အခြောက်ကျနေတာပဲ..အင်းလေ..ငါလိုးတဲ့ကောင်လေးတွေလည်းအခြောက်ဖြစ်ကုန်တာပဲ..နင်ကထမီနဲ့ပိုလိုက်တယ်..နောက်ငါအပြင်သွားရင် မိန်းမလိုဝတ်ပြီးလိုက်ရမယ်..ကြားလား” “ဟုတ်ကဲ့ပါ..မနွယ်” “နောက်က..ရှင်လို့ထည့်ပြောစမ်း..နောက်ငါခေါ်ရင်..ရှင်လို့ထူးရမယ်..ဗျာလို့ထူးရင်..ငါ့အကြောင်းသိစေရမယ်..” “ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်..” “အင်း..လာ..ငါ့သေးပေါက်ပြီးတာ နင်ကဘာကြည့်နေတာလဲ..ငါ့သေးဘယ်လိုနေလဲ.လာခပ်သောက်ကြည့်..”မာမာနွယ်က အေးစက်စွာခိုင်းလိုက်သဖြင့် ကောင်လေးဒူးထောက်ချလိုက်ပြီး ဘိုထိုင်အိမ်သာထဲတွင် သေးနှင့်ရေ ရောနေသော ဝါကျင့်ကျင့်အရေများကို လက်ခုတ်နှင့်ထည့်ယူလိုက်ခါ မော့သောက်ချလိုက်သည်။
“ဘယ်နှယ့်လဲ..ငါ့သေးက..ကောင်းတယ်မလား..နံကောနံလား”ကောင်လေးမှာ ဆိုးဝါးလှသောအရသာရည်ကို ကြိတ်မှိတ်မျိုချလိုက်ရင်း “ဟို..ကောင်းပါ..တယ်…သေးနံ့တော့…နံတယ်ရှင့်” “ဟင်း..ဟင်း..သေးပဲနံမှာပေါ့..ဒါတောင်ရေရောထားလို့..ကဲပါ..လာနောက်ဆိုငါ..နင့်ပါးစပ်ထဲသေးပေါက်ချပါ့မယ်..အခုတော့နင်ပြန်လိုက်ခဲ့..င့ါဖင်ကိုလာလိုးဦး..ငါဖင်ခံချင်နေပြီ…ဖင်ပေါက်ကလဲယားလိုက်တာ.ရှီး”မာမာနွယ်အိုးကိုခါရမ်းပြီး အိပ်ခန်းထဲပြန်ဝင်သွားသဖြင့် ကောင်လေးမှာလည်း ဖင်ချပေးရန်လိုက်သွားရလေ၏။ ကုတင်စောင်းတွင်လက်ထောက်လိုက်ပြီး ဖင်ကိုနောက်ပစ် ခါးကိုကုန်းလိုက်သဖြင့် ဖြူဖွေးနေသော ဖင်သားနှစ်ခုကြားမှ နီညိုရောင်ဖင်ပေါက်ကို တွေ့လိုက်ရတော့ သေးသောက်လိုက်ရသဖြင့် နင်တင်တင်ဖြစ်နေသည်မှာ ထိုမြင်ကွင်းကိုတွေ့လိုက်ရသည်နှင့် ပြေပျောက်သွားသလို ကောင်လေးခံစားလိုက်ရသည်။ မာမာနွယ်ကုန်းချက်ကလည်း ရက်စက်သည်။
တုတ်ခိုင်ပြီးလုံးဝန်းသော ပေါင်နှစ်ချောင်း ထောက်ကန်ထားသည့် အိစက်ညက်လှသည့် ဖင်သားနှစ်ခြမ်းကြားမှဖင်ပေါက်ကို လိုးရမည်ဆိုတော့ကာ…..။ကောင်လေးမှာ ခုနမှပီးသော်လည်း ၄င်းအနေအထားကိုမြင်တွေ့ ရသည်နှင့် သူ့ပေါင်ကြားက ညီဘွားမှာ မတ်ထောင်လာနေ၏။ ၀တ်ထားသောထမီကို ကွင်းလုံးချွတ်ထားလိုက်သဖြင့်လည်း လီးမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကြီး တောင်နေသည်။ “ကောင်လေး..နင်အံဆွဲထဲမှာ ဖင်လိုးဖို့ဆီ ရှိတယ်..နင့်လီးကိုရွှဲနေအောင်လိမ်း..နောက်ငါ့ဖင်ကိုလည်းလာလိမ်းပေးအုံး..မြန်မြန်..ဒီက.ဖင်ခံချင်ပါပြီးဆိုမှ…”မာမာနွယ်ဆိုလိုက်သည်နှင့် ယခုမှကောင်လေးမှာ တက်တက်ကြွကြွနှင့် အံဆွဲကိုဖွင့် ပုလင်းထဲမှ ဘာရည်မှန်းတော့မသိပြစ်ချွဲချွဲအရည်တစ်ချို့ကို သူ့လီးမှာ ရွှဲနေအောင်သုတ်ပေးလိုက်၏။
နောက်သူလက်မှာ အရည်တစ်ချို့ကို နှိုက်ယူလာပြီး မာမာနွယ်ကုန်းပေးထားသော နောက်တွင်နေရာယူခါ လက်ကိုဖင်သားခြမ်းကြီးများကို ဆွဲဆွဲနယ်ပေး..ဖင်ပေါက်ကို လက်နှင့်ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးနှိုက်ပေးလုပ်လိုက်သည်နှင့် မာမာနွယ်မှာ ဖင်ကိုနောက်ကိုအတင်းကောက်ပစ် ပါးစပ်မှလည်းတဟင့်ဟင့်နှင့် ကာမဒီရေအထူးတက်နေလေတော့၏။ “အင်းကောင်းတယ်..နှိုက်.နှိုက်.ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးလုပ်လေ..အင့်..အင့်..အ..ကောင်လေးရယ်…ငါ့ဖင်ကို..လက်တစ်ဆုံးထိုးစမ်း..အား..အ.အင့်..လုပ်.လုပ်.. ကောင်းတယ်..ကောင်း..အ.အ.ငါ့ဖင်ကို ..ရိုက်အုံးလေ..အင့်.အင့်..ဖြန်း..ဖြန်း..ဖြန်းဖြန်း..အား.အားအား..ရိုက်ရိုက်..ကောင်းတယ်..အင်း..” “ဖြန်း.ဖြန်း.ဖြန်း.”မာမာနွယ်ဖင်သားများကို နီရဲတွတ်အောင် ကောင်လေးမှာ လက်ဖဝါးဖြင့်တဖြန်းဖြန်းရိုက်နှပ်နေလေသည်။
သူမတော့မည်သို့နေမည်မသိ ကောင်လေးကတော့.လက်ဖဝါးကိုကြိန်းစက်နေသည်။ “ရပြီ..ငါ့ကိုဖင်ကိုလိုးတော့..အီး…….ဟုတ်တယ်..ဖြည်းဖြည်း..အ..အ. ရှီး..နာလိုက်တာ..အား..ဖြည်းဖြည်းထည့်..အ..အ.အင်း..ခဏ..ခဏ..စိမ်ထားအုံး”မာမာနွယ့်ဖင်ထဲ ကောင်လေးလီးမှာ တစ်ဝက်လောက်အသာကြိတ်ထည့်သောကြောင့် ၀င်သွားသည်။ ဖင်သားတစ်ခုလုံး ရှုံ့ထားသဖြင့် လီးမှာ ကြပ်ထုပ်လျက်အံကြိတ်ယူရအောင်အရသာရှိလှသည်။ ကောင်လေးကလည်း စိမ်ထားတုန်း အငြိမ်မနေ ဖင်ကိုစကောဝိုင်းပတ်တလှုပ်လှုပ် ကစားပေးနေ၏။မာမာနွယ့် နို့ကို လည်းလက်နှစ်ဖက်ဖြင့် လှမ်းလှမ်းကိုင်သည်၊ ဆွဲသည်၊ညှစ်သည်။
နို့သီးခေါင်းကို ပွတ်ချေကာကစားပေးသည်။ကြာတော့ မာမာနွယ် ဖင်ထဲလီးဝင်တာကောင်းလာသဖြင့်ဖင်ကို အသာနောက်သို့ဆောင့်ပစ်သွင်းပေးလိုက်ရာ ကောင်လေးကလည်းမာမာနွယ့် စိတ်တိုင်းကျ သူက ရှေ့သို့ဆောင့်အချ လီးတန်က တစ်ဆုံးဖင်ထဲအတင်းထိုးဝင်သွားလေ၏။ “အား….အမေ့…အီး..အ….ရှီး..နာလိုက်တာ..အင်း…ကောင်လေး..စောက်ပတ်ကိုနှိုက်စမ်း..စောက်ရမ်းလိုးမနေနဲ့..သူဖင်မခံရတိုင်း…အ..အ.”ကောင်လေး မာမာနွယ့်ရှေ့ပေါက်ကိုအသာပွတ်ပေး နှိုက်ပေးလုပ်လိုက်မှ မာမာနွယ်လည်း မွေ့ရာကို တံတောင်နှင့်ထောက်.မျက်လုံးလေးမှေးခါ.ငြိမ်သက်သွားသည်။ကောင်လေးက အခြေအနေကောင်း လာသောကြောင့် စောက်ပေါက်ကိုနှိုက်ရင်း ဖင်ထဲရှိလီးကို နောက်သို့အသာချော့ထုတ်သည်။
လက်နှစ်ဆစ်လောက် နောက်ဆုတ်ခါ ဆတ်ခနဲ ရှေ့သို့ဆောင့်လိုးလိုက်သည်။ “အ..အင်း..အ.ကောင်းတယ်..အင်း..အ..လိုး.ဖင်ခံလို့ကောင်းလိုက်တာ..လိုး..လိုး..လိုး..အ.အ.အ.”အစပိုင်းလက်နှစ်ဆစ်လောက်ပေမယ့် နောက်တော့အရှိန်ရလာပြီး ဖင်ထဲတစ်ဆုံးနီးပါးထုတ်သွင်း လိုးနေသည်။ကောင်လေးမှာ စောက်ပတ်ကိုတောင်မနှိုက်အား မာမာနွယ်ခါးသိမ်သိမ်ကိုသာ အတင်းညှစ်ကိုင်ထားပြီး ဖင်ထဲသို့မိမိလီးဝင်နေထွက်နေသည်ကိုသာ အာရုံစိုက်ပြီးလိုးနေမိသည်။
“ဖေါက်..ဖေါက်..ဖေါက်.ဖေါက်ဖေါက်…အ.အ.အ.အ.အီး.ဖေါက်..နင်ငါ့ဖင်ကို.ချလို့ကောင်းရဲ့လား.ကောင်လေး..ဗေါက်.ဗေါက်.အီး..အား.အ.အ.” “ဟင်း.ဟင်း..ကောင်း..ကောင်းပါတယ်..မနွယ်..” “အင့်.အင့်..ဖင်ခံရတာကောင်းလွန်းလို့…ဖင်ထဲနောက်ဆိုလီးတောင်အမြဲတမ်း..အ..အင့်. ထည့်ထားလိုက်ချင်.တာ.အ.အ.အင်း..အင့်..လိုးစမ်း..ဖင်ကွဲအောင်လိုး….နောက်ဆိုစောက်ပတ်ကို မလိုးခိုင်းဘူး..အ..အ.အင့်.အင့်.ငါ့ကိုဖင်ပဲချ..သိ…လား..အင့်အင့်..အင့်..” “ဟုတ်..ဟုတ်..မမနွယ်..”နောက်ဆုံးကောင်လေးတစ်ဆတ်ဆတ် လိုးနေရင်း မာမာနွယ်ဖင်စအိုပေါက်ထဲသို့ လီးရည်များတစ်ပြစ်ပြစ် ပန်းပန်းထုတ်လိုက်ခါ ပီးသွားလေသည်။
မာမာနွယ်လည်းဖင်ထဲက ပူခနဲခံစားလိုက်သည်နှင့် တပြိုင်ထဲလိုလို စောက်ပတ်မှ အရည်များထွက်ခါ နှစ်ယောက်လုံးတစ်ယောက်ပေါ်တစ်ယောက်ထပ်..ငြိမ်သက်ရင်း အမောဆို့နေသည်ကို ဖြေဖျောက်နေရလေသည်။ကောင်လေးလီးကတော့ ဖင်ထဲမှာ စွပ်ရက်သားရှိနေသေးသည်။နှစ်ယောက်လုံး ချွေးတလုံးလုံးနှင့် ကောင်လေးမှာ ညက်ညောလှသည့်မာမာနွယ်ပုခုံးသားကို ကိုင်စုပ်ပြီး အမောဖြေနေရလေ၏။ “တီ..တီ..တီ..”စားပွဲပေါ်မှ တယ်လီဖုန်းမည်သံကြောင့် နှစ်ယောက်လုံး အမောဖြေသည်မှမဝသေး ကောင်လေးမှာ ဖင်ထဲဝင်နေသောသူ့ညီဘွားကို ဆွဲနုပ်ပြီး ဘေးသို့လိမ်းဆင်းကာ ကုတင်ပေါ်သို့ပတ်လတ်လှန်ချလိုက်သည်။
မာမာနွယ်ကတော့.တယ်လီဖုန်းကိုကောက်ကိုင်လိုက်သည်။ “ဟလို..” “သမီးနွယ်..ဘဘပါ” “သြော်..ဘဘ..သမီးခုပဲ..ဘဘအကြောင်းစဉ်းစားနေတာ..ပြော.နှစ်ရက်ရှိပြီ.ဘယ်သွားနေတာလဲ..ဒီမှာ.သမီးက.ဘဘကိုသတိရနေတာကို..ဟွန်းနော်.ပြော.ပြော.ဘယ်ကောင်မလေးတွေ့နေလို့လဲ..” “ဟဲ.ဟဲ.သမီးကလည်း ဘဘကဒီသမီးလေးတစ်ယောက်ထဲ..ရှိတာကို.တခြားကောင်မလေးများစိတ်တောင်မကူးဘူး..” “ဟွန့်..ပြောတာပဲ.ဘဘနော်..သမီးကွယ်ရာမှာ..ရှုပ်ဖို့တော့မစဉ်းစားနဲ့..ရှမ်းပြည်နယ်မှာ..သမီးစုံစမ်းရင်အားလုံးသိတယ်..ကဲ..ပြော..ဘဘကိုတွေ့ချင်တယ်..အိမ်လာမှာလား..ဒါမှမဟုတ်..ဘဘဆီလာရမလား” “ဘဘဆီ.ဒီညလာလေသမီး.သမီးကို .ဘဘမိတ်ဆွေတွေနဲ့မိတ်ဆတ်ပေးရဦးမယ်..
သမီး..ဘဘမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်အတွက်..သမီးသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လောက်ခေါ်ခဲ့ပါလား..ဟိုတစ်ခါကလိုပေါ့.. အဆင်ပြေလားသမီးလေး..” “အင်း.ရတာပေါ့.ဘဘကလဲ.သမီးခေါ်ခဲ့မယ်လေ.ဘဘ….” “ပြောလေ..သမီး..” “သမီးကို.ချစ်တယ်နော်..” “အင်း..ချစ်တာပေါ့ကွယ်.သမီးကလည်း..အရမ်းချစ်” “ခစ်.ခစ်.ခစ်..ဘဘကလည်း.ဒါပဲနော်.ဆေးလေးပါလေးကြိုသောက်ထားအုံး..ဟွန့်.အရှိန်ရမှကျသွားဦးမယ်..သမီးကဘဘလိုးတာခံချင်လှပြီ..ခစ်..ခစ်..ခစ်..ဟင့်” “ဟား.ဟား.အေးပါသမီးလေးရယ်..နောက်မှကြောက်ပါပြီလို့ပြောမနေနဲ့အုံး.ဒါနဲ့..သမီး.ဘဘကိုတွေ့ရင်ဆုချရမယ်နော်..”
“အင်.ဟင်…ဘာဖြစ်လို့…လဲ….ဘဘလင်ကြီးရဲ့.” “ရန်ကုန်မှာ..ဦးသိုက်မောင်းကွဲနေပြီ..သမီး.ခုနကပဲ.ဘဘသိတာ..ဘဘနဲ့သမီး.ကြံတာအောင်မြင်သွားပြီ” “ဟင်.တကယ်လားဘဘ.ပြောပါဦး..ဦးသိုက်မောင်းဘယ်လိုဖြစ်နေပြီလဲ.” “ဘဘတို့ဂွင်ဆင်ထားသလိုပဲလေ..ဦးသိုက်မောင်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းက..ကိုင်ထားတဲ့ပရောဂျက်ကို.၀န်ကြီးဌာနပိုင်မြေပါတယ်ဆိုပြီး..အမှုရင်ဆိုင်ခိုင်းထားလိုက်တယ်လေ..ဟား..ဟား သမီးကိုမြင်စေ့ချင်တယ်.ရန်ကုန်မှာဦးသိုက်မောင်း ကြွက်လိုပုန်းနေရပြီ.နောက်လည်းနလံထူဖို့မရှိတော့ဘူး..ဟဲ.ဟဲ..ဟဲ” “အင်း..ကျန်တာတော့သမီးသိတယ်ဘဘရဲ့.တကယ်လို့..အဲဒီမြေကသူတကယ်ပိုင်တာလား..အမှုနိုင်သွားရင်ကော..ဒါမှမဟုတ်…သူ့တကယ်နာလံမထူနိုင်အောင်စီးပွားပျက်ပြီလား..သမီး သိချင်တယ်” “ဒီလိုသမီးရေ..သမီးသိတဲ့အတိုင်း.ဦးသိုက်မောင်း.ပရောဂျက်စာချုပ်ကို.သမီးဆီကဦးသိရတယ်နော်..ဟုတ်တယ်ဟုတ်..အဲဒီစာချုပ်မှာ.သတ်မှတ်အချိန်အတွင်းမပြီးလို့ရင်..ပေးချေရမယ့် ပမာဏက..များတယ်ဆိုတာလည်းသမီးသိတယ်နော်..”
“အင်း.” “အမှန်က..ဦးသိုက်မောင်းကအဲဒီမြေကို တကယ်ပိုင်တာ..သူက၀န်ကြီးဌာနကနေတဆင့်ဝယ်ထားတာ.စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ထိုးထားတာက ဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးထားတာ ဦးသိုက်မောင်းကံဆိုးချင်တော့..အဲဒီညွှန်ကြားရေးမှူးက.အခုနိုင်ငံခြားကို.အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံတော်တာဝန်နဲ့ရောက်နေတယ်.သူ့နေရာမှာ.ဘဘလူကိုထည့်ထားတော့.ဘဘကဖုန်းဆက်ပြောပြီးခိုင်း လိုက်တာနဲ့.ဘဘလူက.တရားရုံးကိုစာတင်ပြီး..တရားထဆွဲတာ.” “အဲဒီဘဘလူက.ဘာမှမသိဘူးလား..” “ဘယ်….ဒီကောင်တွေလား..ဘာမှနားလည်တာမဟုတ်ဘူး..ဟိုအရင်လူနဲ့အပုံကြီးကွာတာ..
ဒါပေမယ့်.ကောင်းတာတစ်ခုက.ခိုင်းရင်ဘာမှစောဒကမတက်ဘူး..ဟဲ.ဟဲ..ဒီကောင်တွေက မွေးထားတဲ့ခွေးလိုပဲ..ရှုးတိုက်ပေးတိုင်းလိုက်ကိုက်တာ.ဦးနှောက်နဲ့ဘာမှမစဉ်းစားဘူး..နည်းနည်းပါးပါးအရိုးလောက်ကိုက်ရရင်ကျေနပ်နေတာ..ဘဘကဖုန်းထဲကနေ..ဟေ့ကောင်.. အရင်ကောင်က..ဌာနပိုင်မြေကိုရောင်းသွားတာမင်းမသိဘူးလား..မင်းအဲဒီကိစ္စရှင်းဆိုတာနဲ့..ဦးသိုက်မောင်းကို.တရားထဆွဲတာပဲ..ဟား.ဟား..တော်တော်ရယ်ရတဲ့ကောင်.တရားထဆွဲတော့.တရားရုံးက.ဦးသိုက်မောင်းစီမံကိန်းအဆောက်အဦးကို..ချိတ်ပိတ်ပီးနို့တစ်စာပို့တော့တာပဲ..ဘဘလုပ်လိုက်တာဘယ်လောက်တောင်..ဖြစ်သွားလဲတော့မသိဘူး.. ရန်ကုန်မှာ.ဦးသိုက်မောင်းနေ့ချင်းညချင်းမွဲသွားပြီးဆိုပြီး..သူ့ကုမ္ပဏီကရှယ်ယာတွေကိုတောင်အတင်းထုတ်နေကြပြီသမီးရဲ့..” “ဦးသိုက်မောင်း တရားနိုင်သွားရင်ကော.ဘဘ.ပြီးတော့.ဦးသိုက်မောင်းက အဆက်အသွယ်တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ကြားတယ်.
အဲဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ..ဘဘ” “ဟင်း..ဟင်း..သမီးလေးကလည်း..ဘဘပါ..အခုဦးသိုက်မောင်းရဲ့.ဆရာကြီးတွေကိုယ်တိုင်..ဦးသိုက်မောင်းနဲ့မဆက်သွယ်ရဲကြဘူး.ဦးသိုက်မောင်းက..ငွေတွေဘုန်းပြီးထွက်ပြေးနေတယ်လို့လဲ ကောလဟာလထွက်နေတော့..ရန်ကုန်မှာ..စသုံးလုံးကအဲဒီအမှုကိုလက်ခံပြီး စစ်ဆေးရေးလုပ်နေတာ..ဘဘထင်တာ.ဦးသိုက်မောင်း .တရားရုံးမှာတော့အမှုနိုင်မှာပဲ..ဒါပေမယ့်သတ်မှတ်ကာလကျော်သွားလို့ သူ့စာချုပ်ပါ.လျော်ကြေးတွေပေးရတာနဲ့..အခုပြဿနာတွေရှင်းရတာနဲ့ဆို ဦးသိုက်မောင်းတော့..ဒီတစ်သက်နာလန်ထူနိုင်မယ်မထင်ဘူး..”
“ခစ်..ခစ်…ဘဘကအရမ်းတော်တာပဲ..အင်း..ဒီကြားထဲ..ဘဘပါ..ပါနေအုံးမယ်..တော်ကြာ..ဘဘတပည့်က.ဘဘခိုင်းလို့လုပ်ရပါတယ်ဆိုပြီး.တရားရုံးမှာပြောရင်..ဘယ်နှယ့်လုပ်မလဲ” “ဟာ..ဒီကောင်.လား..ဘဘပြောဒါက..ကိစ္စရှင်းလို့ပြောတာ..ဟင်း.ဟင်း..သူ့ဘာသာတရားထဆွဲတာ..ဒီကောင်ကိုလည်း..နည်းနည်းပါးပါး.ပေးလိုက်ပြီး..အဲဒီဌာနကနေဖြုတ်လိုက်ရင်.. ဘဘအကြောင်းဘယ်သူသိတော့မလဲ..ဟုတ်ဖူးလား..” “ဟင့်.ခစ်..ခစ်.ခစ်..ခစ်..အဲဒါကြောင့်..ဘဘကိုသမီးကအားကိုးတာ..တွေ့မှ.ကောင်းကောင်းဆုချမယ်..ဒါဆိုညမှတွေ့မယ်နော်ဘဘ..တာ့တာ..” မာမာနွယ် ဖုန်းခွက်ကိုချလိုက်ခါ သူ့ဘေးနားကုတင်ပေါ်တွင်မှောက်လျက်လေးလှဲခါ အမောဖြေနေသောကောင်လေး၏ ဖင်ကို လက်ဝါးဖြင့် ဖြန်းခနဲချလိုက်ပြီး “ဟဲ့..နင့်ကိုဒီမှာသေဖို့ခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူး…သွားငါ့အတွက် အောက်ထပ်မှာ ဖျော်ရည်လုပ်လာခဲ့လို့ပြောလိုက်..ပြီးရင်နင်ပြန်တော့..ငါရေမိုးချိုးပြီးဆင်းလာခဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်အုံးနော်..သွား.. ယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီး ..နှေးတိနှေးကန်နဲ့..မြန်မြန်” ကောင်လေးမှာ ကုတင်ခြေရင်း.တွင်ပုံထားသောသူ့အ၀တ်အစားပုံကို အသာကောက်ယူပြီး အခန်းထဲမှ ကိုယ်တုံးလုံးထွက်သွားလေ၏။ ၄င်းကောင်လေးထွက်သွားသည်နှင့် မာမာနွယ်လည်း ရေချိုးခန်းဝင်ခါ ရေနွေးနှင့် ရေတစ်ဝချိုးပစ်လိုက်သည်။
ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်လာသည်နှင့် စားပွဲပေါ်တွင် သူမအတွက် စတော်ဘယ်ရီဖျော်ရည် ခွက်ကအဆင်သင့်။ညဖက် မာမာနွယ်သူ့ဘိုးတော်ကို ဖြေဖျော်ရန် အလှပြင်ဆိုင်သွားဖို့ယခုကတည်းက အ၀တ်အစားများထုတ်ရွေးနေသည်။သူမ နှင့်အတူလိုက်မည့် မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းဖုန်းဆက်ခါ အသင့်ချိန်းလိုက်သေးသည်။ ဘာပဲပြောပြော.မာမာနွယ်စိတ်လက်ပေါ့ပါးနေသည်။သီချင်းလေးတအေးအေးနှင့် အ၀တ်အစားများကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နေသည်။ဟုတ်သည်လေ..ခုလေးတင် သူမ၏ ခလုတ်ကန်သင်းတစ်ခု ရှင်းလင်းသွားပြီဆိုတော့.ဘာပဲပြောပြော ပျော်သည်လေ၊ပျော်သည်။ သူမဒီနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်စီးပွားရေးလောကသို့ ခြေချခွင့်ရတော့မည်။ သူမဘိုးတော်အကူအညီနှင့် ဆိုလျှင်တခဏအတွင်း စီးပွားရေးလောကတွင် မာမာနွယ်နာမည်ကို လူတိုင်းပြောစမှတ်ဖြစ်နေစေရမည်။ မာမာနွယ်အတွေးကအတိတ်ပုံရိပ်ကို ပြန်လည်တူးဖေါ်နေမိ၏။